ငါတို့ရွာမှာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Gossip, Rumor » ငါတို့ရွာမှာ	29
Posted by ရွှေ ကြည် on Jun 1, 2014 in Gossip, Rumor, Society & Lifestyle | 29 comments
View all posts by ရွှေ ကြည် →	Blog
ကေဇီ says: အာ့ဆို သာမီး ထမင်းဆိုင်ကို လာခဲ့နော်။
Kaung Kin Pyar says: မျက်ခုံးတွေ လှုပ်လာသလိုပဲ ဟီးးးဟီးး
Shwe Poe says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: သိပ်ကြောက်သွားလားးးး မရွှေကြည်။ မပြောင်းမလဲပဲ နဂိုအတိုင်းပဲ စိတ်ရင်းနဲ့ ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာကို စိတ်ရှိလက်ရှိုငြင်းခုန်နေကြသူတွေလည်း အများကြီးပါပဲ ချစ်ရွှေကြည်လေးရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: ငါတို့ရွာကို
alinsett (gazette) says: သဂျီးကသာ… ရွာကနေ မြို့ ဖြစ်ပြီတဲ့ …
မြို့ ကြီးသားကြီး ဖြစ်ချင်စမ်းပါဘိ…
Swal Taw Ywet says: လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဝိုင်းကြတဲ့ ရွာကွပ်ပစ်လေးလဲ ယိုင်နေရပြီ။ တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော် သေချင်နေမိနေပြီ။
ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း says: ရွှေကြည်ရေ…အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဗျောက်အိုးဖောက်မဲ့သူတွေ သိပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူး..လို့ထင်ပါတယ်..
ကျနော်တို့ ငြင်းခုံခြင်း အနုပညာနဲ့ပဲ အသိတွေများစွာတိုးခဲ့ပါတယ်…ငြင်းခုံခြင်း..သမာသမတ်ရှိသော ငြင်းခုံခြင်းဟာ ဒီမိုကရေစီပါပဲ…လို့ကျနော်ကတော့မှတ်ယူထားပါတယ်။
padonmar says: (ငါတို့ရွာမှာ
အဲဒါ အမှန်ပဲ။ဒါပေမယ့် ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း မတွေ့မိသေးဘူး။
ဒီလိုလုပ်ကြရအောင်၊ဒို့တွေ အကောင့်အသစ်ဖွင့်ပြီး ရေးကြမယ်လေ။
ရုပ်ဖျက်ကြည့်တာပေါ့။(သူကြီးကတော့ ပွိုင့်တွေ ကယ်ရီလုပ်ခွင့်ပေး)
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3139
surmi says: သဂျီးကိုတောင်းဆိုရမယ်အစ်မရေ
မန်ဘာတစ်ယောက်ကို အကောင့်သစ်သုံးခုဖွင့်ခွင့်ပေးဖို့ ဟဲဟဲ
တကယ်သာဆို ပွဲက အမိုက်စားဘဲ
kyeemite says: ပြန်လာတာကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်။။။
manawphyulay says: ငါတို့ရွာမှာ ရေးကြ မှတ်ကြ ဖတ်ကြ
ငါတို့ရွာမှာ ငြင်းကြ ခုန်ကြ
ငါတို့ရွာမှာ ပျော်ကြ ရွှင်ကြ
ငါတို့ရွာမှာ ရန်ဖြစ်ကြ ပြန်ချစ်ကြ
ငါတို့ရွာမှာ လှူကြ တန်းကြ
Wow says: ရေးကျိစမ်းဘာာာ တစ်ဗုဒ်လောက် ပိုးစိုးပက်စက် အားမနာတမ်း ဝေဖန်ပလိုက်မာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2223
ရွှေတိုက်စိုး says: အမလေးနော် မှန်လိုက်လေ မှန်လိုက်လေ..မရွှေကြည်ရေ… ရွှေကြည်လေးကို မလိုင်လေးနဲ. အုပ်ပေးချင်ထာ…
ကျုပ်တို.ရွာမလဲ… ပို.စ်တင်တဲ့သူက တင် မန်.တဲ့သူကမန်. အဲလိုလေး.ဖြစ်နေပြီး…
ပို.စ်တင်သူများက ပို.စ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို.အတွက် (တကယ်ရေးသူပြောတာနော်)… စိတ်အား လူအား.. အကုန်ညှစ်ထုတ်ပြီး ပို.စ်တပုဒ်ကို အင်တိုက်အားတိုက်ဖန်တီးလိုက်ရတာ… ပို.စ်ပိုင်ရှင် ကတော့ သူအားထုတ်ထားတဲ့ ပို.စ်တပုဒ်အတွက် အချိန်တိုင်းမျှော်လင့်နေရတာကတော့ ကော့မန်.ပါဗျာ… အခုတော့ ကိုယ်အားထုတ်ထားတဲ့ပို.စ်လေး လူဖတ်များအောင် မနဲ.ဆုတောင်းနေရတာပါလား…
ဘယ်နှယ့်.. အခုတော့ ပို.စ်တွေမှာ အာလပ သလာပ တွေ များနေသလားလို.ရယ်ပါ…. တကယ့် အားစိုက်ထားတဲ့ ပို.စ်ကြတော့ ဖတ်ချင်လဲဖတ်မပေါ့.. မန်.တဲ့သူက ၁၀ မကျော်ဘူး… အဲဒီတော့ကား..
ကျုပ်တို.ရွာမှာ ခင်မင်မှုကို ဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်တော့… တခြား ချက်တင်ဘောက်တွေအတိုင်းသာဖြစ်နေပါပေါ့လား….. တစ်ခုခုမန်.မယ်ဆိုရင်တောင် မျက်နှာနာစရာဖြစ်မဆိုးလို. မမန်.ကျတော့ဘူးလေ…
လူချင်းတွေသိနေကြတော့ ပြောရမှာခက်နေကြတယ်ထင်ပ… ဒါဆို မတွေ.ကြရင်အကောင်းသားလို. ပြောရမလို ဖြစ်နေပြီနောာာာာ… မရွှေကြည်ရေ…
ကျုပ်ကတော့ တွေ.ဘူးဘူး မတွေ.ဘူးဘူး… ကိုယ်နားလည်သိတဲ့ပို.စ်ဆို မန်.တာပဲဗျို..
kai says: ပိုစည်သွားအောင်.. ကော်မန့်အမှတ်ကလေးတွေ… နည်းနည်း(တကယ့်ကိုနည်းနည်း) တိုးပေးလိုက်ပါကြောင်း..
မန့်ကြစေလို….။ မန့်ခံရအောင်ရေးကြစေလို..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
Mr. MarGa says: အဝှာလေ
မန့်ခံရအောင် ရေး ဆိုတော့
ဘာရေးရေး ကွန်မန့်ရရင် ပီးတာပဲ ဆိုပြီး ရေးချင်ရာရေးရမှာလား ဟင် အာ့လို ဆိုရင်တော့
ကွန်မန့်ရရေး ဒို့အရေး ပဲ
surmi says: အမန့်ခံရအောင်ရေး တဲ့
ဟွင်းဟွင်း မမှတ်သေးဘူးလား လုပ်စားပို့စ်တွေထွက်လာမှဖြင့် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာမြောက်တဲ့.. ကောမန့်များသာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: သဂျီးလည်း ရွာသူားတွေကို ပြန်ကြောက်နေပြီ……… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: .အင်းပါ….
ရွှေတိုက်စိုး says: ကော့မန်.အမှတ်တိုးတယ်တဲ့ ဟေးဟေးဟေး…
ကြည့်လဲလုပ်အုံးသဂျီးရေ… ကျုပ်တို.ရုံး လစာတိုးသလိုမလုပ်နဲ.နော်… တစ်နှစ်လုံး လစာ adjust မျှော်လာလိုက်တာ… ပိုးစိုးပက်စက် တိုးတာ… ၁၀ ဒဲ့….
ဘယ်လိုပဲပြောပြော တိုးတယ်ဆိုတော့ တိုးတယ်ပေါ့ဗျာ….
တစ်သိန်းပြည့်ရေးးးး ဒို.အရေး ၃ခါ….
အာဂ says: ဟေ့ ဘာလဲကွ….နာ….ဆဲချင်လာဘီနော်….ဟွင်းဟွင်း…..တယ် ကျောလိုက်ရမကောင်းတော့ဘူး..
မှတ်ချက်။ သူဂျီး ကွန်မန့်ကို တကယ်တိုးပေးမပေးစမ်းကြည့်တာပါ ဟီးးး
Ma Ei says: ငါတို့ရွာမှာ
… … … ဒီလိုပါဘဲ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ငါ တို့ ရွာမှာ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: တခါတခါမျက်ခြေပြတ်ပြီးမှပြန်ရောက်လာ မျက်စိလည်လည်ထွက်သွားလွန်းလို့ ဘေးပြန်ပြန်ထွက်နေရတယ်ချစ်ညရေ
Novy says: ငါတို့ရွာမှာ ….. ဆဲကျဆိုကျ ရန်ဖြစ်ကျ
ငါတို့ရွာမှာ….. အရိုးကွဲမှ အသည်းစွဲ
ငါတို့ရွာမှာ …. တစ်ကောင်းထဲ ခြင်္သေ့လည်းရှိအိ
ငါတို့ရွာမှာ …. အုပ်စုဖွဲ့ကြွက်များလည်းရှိအိ
တိမ်မည်း says: ငါတို့ ရွာမှာ….. အော်ရီဂျင်နယ်လည်းရှိတယ်… ကော်ပီလည်းရှိတယ်….
ငါတို့ ရွာမှာ…. ရသလည်းရှိလည်း… ကဗျာလည်း ရှိတယ်….
ငါတို့ ရွာမှာ…. လူကြီးလည်းရှိတယ်… လူငယ်လည်း ရှိတယ်…..
ငါတို့ ရွာမှာ…. လူသစ်လည်းရှိတယ်… လူဟောင်းလည်း ရှိတယ်….
ပြောတော့ပါဖူးကွယ်….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1991
Choo says: အမ်းးးးး ဟိုအံတီယီးက ကိုယ်ခွဲပီးကစ်မယ်တဲ့ (ခင်မောင် ခင်မောင်) ရပ်ပါအသံဖြင့်ဖတ်ပါ ဟိုဘိုးတော်ယီးကတော့ သုံးကိုယ်တောင်ခွဲပီး ထမနဲထိုးမယ်ဆိုဘဲ (ကျောက်စ်ပါပီ အံတီနှင်းနဲ့) ချစ်တီးဂဓေါ်ကတော်လူဝင်ဇားကလဲ မီလယံနာဖစ်မယ့်ပွိုင့်တွေကို
ကယ်ယီလုပ်အုံးမယ်ဒဲ့ အာဟိ အာဟိ တွေ့ဂျတေးတာဘော့ကွာ…… ကျား နဲ့ ခြင် လယ်ပြင်မှာတွေ့ဂျတေးတာဘော့… ငှဲလျောင်း ငှဲလျောင်း
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ထိုင်ပြောနေဒယ်
ဟုတ်လည်း ဟုတ်ဘဲနဲ့ …